Ka hel saxnaanta mitirka mitirka 'iPad / iPhone' - Geofumadas
Febraayo, 2015 GPS / Qalabka, aragti ugu horeysay
Qalabka GPS-ka ee qalabka iOS, sida iPad ama iPhone, wuxuu ku helaa si sax ah nidaamka bog furaha kale: inta u dhexeysa 2 iyo 3 mitir. Marka laga reebo GIS Kit, Haddaan arkay fursadaha kale yar si loo hagaajiyo ay sax, si kastaba ha ahaatee in la tashan saaxiib mahad, waxaa xiiso leh in la eegno toy this, ka duwan Aqoonsi tani waxaa lagu dhejiyaa qalab mobile.
In kasta oo ay u egyihiin qalab fudud, Badmareenka Bad Elf GNSS waa aqbaar cusub oo xoog leh oo ku shaqeeya Bluetooth kaas oo siinaya aaladda moobilka ikhtiyaarka ah inuu noqdo qaataha GNSS, oo ay ku jiraan dareemayaasha barometric si ay u helaan joog ka sarreeya heerka badda. Daqsi ahaan waxay u shaqeysaa sida biraawsar, laakiin qaab taagan, waxay ku guuleysan kartaa saxnaanta mitir-hoosaadka iyadoo la adeegsanaayo SBASS, iyadoo la adeegsanayo taageero kala-soocid dib-u-hagaajin ah (DGPS) oo gaareysa qiyam u dhexeeya 10 iyo 50 sentimitir.
Xitaa waxaa loo isticmaali karaa qalabka 5 isla mar ahaanteed oo laga helo Bluetoot.
Qiimaha ay leedahay, waa runtii jilicsan, maaddaama ay u muuqato mid kale oo xiiso leh in la qaado qiimaha la aqbali karo qiimo yar.
Precision waxay bixisaa Sahanka Bad Elf GNSS
Meeleynta Meel Gaar ah (PPP): loogu talagalay codsiyada joogtada ah ee leh muuqaal wanaagsan. PPP waxay isticmaashaa calaamadda wajiga side si loo yareeyo qallooca ionosphere iyo calaamadaha jidadka badan. Tani waxay bixinaysaa hal mitir oo sax ah iyadoon loo gudbin saldhigyada maxalliga ah ama ilo kale oo sixitaan ah.
Adeegyada Ku Saleysan Meelaynta (SBAS): Iyadoo loo marayo xiddigta dayax gacmeedyada, SBAS waxay ku siisaa sixitaanka xogta wareegga, saacadaha iyo dhibaatooyinka cimilada ama saldhigyada tixraaca dhulka. Caymiska waxaa ka mid ah Waqooyiga Ameerika (WAAS), Japan (MSAS), Yurub (EGNOS), iyo Hindiya (GAGAN). SBAS lafteeda waxaa ku jira booska jiifka oo leh saxnaanta 2 ilaa 2.5 mitir.
Qalabka kala duwan ee GPS (D-GPS): Isku hagaajin ayaa laga heli karaa saldhigyada saldhigyada meel kasta oo aduunka ah, GNSS waxay taageertaa qiyaasta warshadaha RTCM 2.3 ee hawlgalka sida D-GPS.
Qalabaynta boostada xogta ee RTK: Codsiyada halka saxda ah ee looga baahan yahay (laga bilaabo 10 illaa 50 sentimitir), xog cayriin iyo cabbirada SBAS ayaa loo heli karaa codsiyada ka-dib-u-shaqeynta iyo waqtiga dhabta ah ee kinematic (RTK). Xogtan waxaa lagu heli karaa iyada oo loo marayo SDK iyo faylasha lagu keydiyo qaab keli ah.
Badhasaabka Bad Elf GNSS ayaa sidoo kale ku siin kara xogta GPS-ka qaabka qulqulka NMEA iyada oo loo marayo Bluetooth ama USB aaladaha aan iOS ahayn, sida mobilada ku shaqeeya Android, Windows, Mac OS X ama Linux. In kasta oo hadda taageerada barnaamijyadan ay kooban yihiin.
Shaxda soo socota ayaa muujinaysa sida bilowgii a dhibcood cabbirka tirakoobka waa la helay oo ku saabsan saddex mitir, laba mitir hoos, cabiraada submeter arrin la aqbali karo ka hor afar daqiiqo.
Astaamaha GPS Soodhawraha Bad Elf GNSS.
Xaqiijinta GNSS wax ka yar hal mitir oo istaag leh, dhidid ah SBASS + PPP.
10 ilaa 50 cm sax ah iyadoo la adeegsanayo codsi dib-u-socod ah. Mustaqbalka waxay u balan qaadayaan SDK horumarinta dhinac saddexaad.
Waxay taageertaa dib u dhiska dib-u-dhiska (DGPS), iyada oo la adeegsanayo hagaajinta RTCM oo ka socota shabakadaha xarumaha tixraaca maxalliga ah.
Qaadashada 56 GPS, kanaalada GLONASS iyo QZSS ee leh SBASS (WAAS / EGNOS / MSAS)
Dhaqdhaqaaqa wuxuu siiyaa saxnaanta GPS ee mitirka 2.5.
Tirada saamiga lagu xakameyn karo 10 Hz.
Muuqaal muuqaal ah oo muuqaal ah, GPS + GLONASS on screen LCD dhalaalaya.
Nolosha batteriga, illaa 35 saacadood. In kasta oo ay taageerto illaa 200 saacadood oo aan lahayn qaab soo dhaweyn ah.
Waxaa laga daawan karaa kombiyuutarka iyada oo loo marayo fiilada USB, waxay u egtahay qalin galin.
Kala doorasho in lagu xiro habka socodka akhrista PC ama Mac.
Waxaa ku jira barometerka sareeya.
Bilaabid kulul ayaa ugu dhakhsaha badan hal ilbidhiqsi, iyada oo soo dhaweynta dayax-gacmeedka iyada oo aan lagu tiirsanaan munaaradda taleefanka. (Uma baahna internet helitaanka GPS).
Waxaa loo isticmaali karaa ilaa mitirka 18,000, haddii ay jirto marin hawo, iyo si dhakhso ah u socodka 1,600 kilomitir saacaddiiba.
Qalabka wuxuu kaligiis u shaqeeyaa, hagaajinta saxnaanta soo dhaweynta iyada oo ku dhowaad codsi kasta oo iOS ah, laakiin wuxuu u baahan yahay isdhexgal iyadoo la adeegsanayo Bad Elf SDK si loo helo astaamo horumarsan. Waqtigaan soo-saareyaasheeda waxay bilaabeen inay si dhab ah ula shaqeeyaan dad badan oo sameeya barnaamijyada ay taageeraan GNSS.
Marka aad iibsanayso qalabka soo socda waxaa ka mid ah:
BE-GPS-3300 Qalabka qabashada GNSS.
90cm fiilada USB ee korontada.
Ciddiyaha baabuurta 12-24.
Waxay ku haboon tahay qalabka iPod, iPad iyo iPhone:
iPod touch shanaad jiilka.
iPhone 5S, 5C, 5, 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iyo iPhone 3G.
iPad Air, iPad (Saddexaad iyo afaraad), iPad 2, iPad.
iPad mini oo leh Retina display, iPad mini.
Qiimaha kor u qaadista wuxuu ku jiraa Doolarka 499.
Ma xuma, marka la barbardhigo koox u dhiganta oo magac caan ah waxay ka sarreysaa $ 1,900 - ama ka badan. Qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan ku arkay xalalka sahaminta saxda ah ee raqiiska ah, in kasta oo ay tahay in la tijaabiyo si loo hubiyo inay macno u leedahay iibsashada badan ee mashruuc weyn.
Halkan waxaad ka arki kartaa macluumaad dheeraad ah.
Post Previous" Hore Maareeyaha joogo da'ayeen for Bricscad
Post Next Geomarketing iyo Asturnaanta: Saamaynta Juquraafiga ee isticmaalaha guudNext »
3 Jawaab ah "Ka hel Xaqiiqda Cabiraadda mitir mitir ipad / iPhone"
Dan Ericson isagu wuxuu leeyahay:
Jag är i stort behover av lähköp länger när jäh föd bjørn bjørf bjørk bjørf
Halkeen ka heli karaa Mexico?
Aad qaali u ah qiyaasta yar ee uu ku socdo